Filohan’ny Antenimierandoholona : “Ara-dalàna ny fitsipika anaty sy ny birao maharitra” | NewsMada
Filohan’ny Antenimierandoholona : “Ara-dalàna ny fitsipika anaty sy ny birao maharitra”
Mbola mahabe resaka ny sasany ny fomba nifidianana ny birao maharitry ny Antenimierandoholona. Ara-dalàna io, raha ny nambaran’ny filoha.
“Fototra araka ny lalàna niaingana ny fitsipika anatiny tamin’ny taona 2008, izay takin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Tsy maintsy niaingany iny, raha tiana ny hirosoana amin’ny ara-dalàna amin’ny fanatanterahana ny asa eo amin’ny Antenimierandoholona.”
Io ny fanazavan’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, tamin’ny famaranana ny fivoriana manokan’ny Antenimierandoholona teny amin’ny lapan’Anosikely, omaly. Anisan’ny tena nibahan-toerana ny fandrafetana ny fitsipika anatiny ary nahabe resaka, raha ny nambarany.
Taorian’ny fifampidinihan’ny birao maharitra, tamin’ny andro voalohany nihaonana, ny 9 febroary, nisy fitsipika anatiny niaingana: ny efa nisy tamin’ny taona 2008. Hany vita fanaraha-maso avy amin’ny HCC eo amin’ny fampiharana azy iny fitsipika anatiny iny. Manankery izany fa tsy mbola nofoanana.
Maro ireo rijan-teny notovanana na nanalana, araka izany, fa tsy mifanaraka intsony amin’ny toetrandro. “Ara-dalàna sy mirindra ny nananganantsika ny birao maharitry ny Antenimierandoholona”, hoy izy. Ny fifidianana ireo ao amin’ny birao maharitra sy ireo filohan’ny vaomiera maharitra izany.
Fitaratra amin’ny ataony ny loholohana
Fitaratra ny loholona eo amin’ny toe-tsaina, ny atao, ny hatsarana, ny fahazotoana miasa, ny fahavononana, fahavanonana… Tretrika ny firenena manana loholona, raha tena miasa: raiamandreny sady mpandrafitra lalàna araka ny fahaizana amam-pahendrena ananany. Mpanolotsaina mivantana any amin’ny antenimieran’ny faritra sy ny faritany koa izy ireo.
Misy ny mpahay lalàna nampiaka-peo
Na eo aza izany rehetra izany, nampiaka-peo ny mpahay lalàna sasany ny tsy nisian’ny fanazavana sy fifampidinihana amin’izay fitsipika anaty na fototra ara-dalàna niaingana. Nampiharina avy hatrany ny fitsipika anaty, taona 2008. Nefa Antenimierandoholona roa samy hafa ny tamin’izany sy izay mijoro amin’izao fotoana izao.
Tsy izay anton-javatra izay ve no nanovana ny birao maharitra voalohany teny amin’ny Antenimierampirenena?